ngomphathi ku 2020-12-02
I-Sophora japonica ikhupha itshathi ye-genistein flow flow & coa
IGenistein sisakhi se-isoflavonoid phytoestrogenic esifumaneka kwiimbotyi zesoya, ipea, kunye nezinye iimbotyi. Ukutya okuqikelelweyo kokutya okuqhelekileyo kwabantu kwe-genistein, ikakhulu njenge-glycosides, yi-0 ukuya kwi-0.5 mg / kg. UGenistein ukhona ngokwexabiso elikhulu kwizongezo zesondlo. IGenistein ngumzimba ...
Ingxelo yovavanyo lomntu wesithathu enzima ye-luteolin, i-Atlas yokufumanisa kunye ne-Coa
Iimveliso eziphambili zeShaxixi Green Bio-Engineering Co., ltd.
Inkampani yethu inenkqubo yokuqhubela phambili egqibeleleyo, amandla omeleleyo obuchwephesha, ubume bezityalo ezifanelekileyo, indawo ecocekileyo necocekileyo. Inkampani yethu ixhotywe ngeendlela ezahlukeneyo zohlalutyo, kunye nayo yonke inkqubo yemveliso ukusuka kulawulo lwezixhobo zokwenza izinto ...
I-NMR, itshathi ye-HPLC, ingxelo yohlalutyo lwekaempferol
I-Sophora japonica ikhupha i-kaempferol 98% Singabenzi abaqeqeshiweyo nabathembekileyo kwizicatshulwa zezityalo zendalo e China. Ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu, sithintelwe ukulawula ukuhamba kwenkqubo yethu. Kulula ukubonelela ngeSophora japonica yokukhupha iimveliso ngexabiso elifanelekileyo kuba ...
Ixabiso le-asidi ye-ferulic liyonyuswa
Kubathengi abathandekayo: Izinto ze-Ferulic acid ekrwada inyuke nge-20 yuan ngekhilogram kutshanje, ke iindleko zeemveliso zonyukile ngaphezulu kwe-20 yuan, Kwinjongo yethu efanayo, Ngokubonisana kwangaphakathi kwenkampani. Ixabiso leyunithi ye-asidi ye-ferulic inyuke nge-3 yeedola zaseMelika ngeekhilogram nganye. Https: //www.sxg ...
Ukutsha kwezinto zobugcisa ze-asidi ye-ferulic
I-asidi ye-Ferulic isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yokutya, amayeza kunye nezimonyo. Ekusebenziseni ixesha eliphakathi le-asidi ye-ferulic kwishishini lezithambiso, abathengi baneemfuno eziphezulu kumbala kunye nokunyibilika. I-Shaanxi Green Bio-Engineering Co., Ltd.yenze uphuculo lokulinga oluqhubekayo ...
umatshini ngaphezulu baxhotyiswa
Nge-Agasti ka-2020, ngokunyusa ii-odolo zabathengi, iShaanxi Green Bio-engineering Co, Ltd., ngokwesiseko sezixhobo zantlandlolo, nika imveliso yokuvelisa imoto ezimbini ezintsha, ioyile yomnyango emine, iimpazamo ezimbini zokuphendula kunye nokusebenza okuphezulu chromatography yolwelo . Inkampani yethu ine ...
Ubomi beemveliso buvela kuphuculo oluqhubekayo lwetekhnoloji
Ngo-2020, phantsi kwenoveli coronavius ​​pneumonia, amashishini amaninzi achaphazeleka kakubi. Ngaphantsi kwempembelelo yale bume imbi, ukuthengisa kweShaanxi green Bio- Engineering Co Ltd. Akuzange ngengozi kodwa sisiphumo senkampani ye-R & D yabasebenzi kunye nemveliso ...
IiGlycosides ezivela kwizicatshulwa zezityalo
Ukudityaniswa kweswekile kunye nezinto ezingezizo zeswekile. Ukuqheleka kwe-glycosides kukwinqanaba leswekile. Iindidi ezahlukeneyo ze-aglycones zinemisebenzi eyahlukeneyo yomzimba kwaye zinemisebenzi emininzi. Umzekelo, amagqabi edijithali ane-glycosides yentliziyo, kwaye i-ginseng iqulethe ii-ginsenosides ze-qi, shengjin ...
Utyalo kuphuhliso imveliso
Idatha ibonisa ukuba kwisiqingatha sokuqala sonyaka ka-2014, bekukho amashishini ali-1074 athumela imveliso yezityalo kwilizwe lam, ukonyuka okuncinci xa kuthelekiswa nenani lamashishini athumela impahla ngexesha elinye ngo-2013. Phakathi kwawo, umthamo wokuthunyelwa kwamashishini abucala wenza ingxelo i-50.4%, f ...
Ukutyala ukuhanjiswa kwemarike kunye nemfuno
Zininzi iintlobo ezahlukeneyo zezicatshulwa zezityalo. Ukuhanjiswa kunye nokufunwa kwezi mveliso kuhlala kuguquka nonyaka kunye nezinto ezahlukeneyo zentengiso, kwaye ukungalingani phakathi konikezelo kunye nemfuno kwenzeka amaxesha ngamaxesha. Supply Impembelelo yokubonelelwa kwemveliso Njengezixhobo ezingafunekiyo zesityalo ...